I-Chalet eqhakaza ehlobo - I-Airbnb
I-Chalet eqhakaza ehlobo
Carraroe, County Galway, i-Ireland
I-indlu yeholidi eyakhiwe ngokhuni ephelele ibungazwe ngu-Monique
I-chalet enhle yamakamelo amabili yokuziphakela enotshani obuhle obuhlelwe kahle nezingadi. Itholakala ngaphansi kwe-1 km ukusuka emabhishi amathathu anesihlabathi amahle kanye nedolobhana laseCarraroe. Ilungele imibhangqwana nemindeni enezingane ezi-2.
I-Cheathrú Rua noma i-Carraroe ngesiNgisi, itholakala kwesokudla emaphakathi ne-Connemara gaeltacht. Sinebhishi lefulegi eliluhlaza okwesibhakabhaka okuphinde kube yibhishi elidumile le-Doilin coral strand kanye namabhishi anesihlabathi angu-4 alungele ukubhukuda.
I-Carraroe nayo ingaphansi kwemizuzu eyi-10 ukusuka ethekwini lase-Ros a Mhíl uma ungathanda ukuvakashela e-Aran Islands.a Esigodini sase-Carraroe Kukhona amakhefi amabili, amabha endawo angu-3, indawo yokudlela, isuphamakethe ye-Eurospar, kanye nosokhemisi.
Mina ngokwami ngihlala kwamakhelwane, ngakho ngiyatholakala kunoma yimuphi umbuzo, kungakhathaliseki ukuthi mkhulu noma mncane kangakanani